Boqore ?Mooshin laga keenay xukuumada in aan la faahfaahin fadhiga ka hor ayaa lagu daray xeerka? – Radio Daljir
Oktoobar 24, 2013 4:56 b 0
Muqdisho, October 24, 2013 – Baarlamanka federaalka ee Soomaaliya ayaa shir balaaran ka yeeshay xeer hoosaadka Baarlamanka kadib dood dheer iyo is mari, ayaa waxaa la meel mariyey labba firqo oo lagu soo kordhiyey qodoboka 75-aad ee xeer hoosaadka.
Xilibaan Cismaan Cilmi Boqore oo ka mid ah mudanayaasha baarlamanka Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey kulankii shalay baarlamanka Soomaaliya ay ku yeesheen Muqdisho, oo? wax looga bedalay xeerka baarlamanka.
?Qodoboka 75-aad ee ku saabsan kalsooni kala noqoshada xukuumada ayaa wax laga bedelay iyadoo lagu diray firqooyin cusub oo awood badan.? Ayuu yiri xilibaan Boqore oo la hadlay idaacada Radio Daljir isagoo jooga Xamar.
?Mooshin laga keeno xukuumada in aan la faah-faahin ka hor maalinta fadhiga furmayo.? Ayaa ka mid ah waxyaabaha lagu kordhiyey ? In xilibaanku xaq u leeyahay inuu ku biiro ama ka boxo soo jeedin mooshin inta aan gudoonka golaha loo gudbin.? Ayaa iyana ku jirta firqooyinka lagu soo kordhiyey qodobka 75-aad ee xeer hoosaadka Baarlamanka.
Baarlamanka Soomaaliya ayaa cod gacantaag ah oo si aqlabiyad leh ku ansixiyey firqooyinkaas cusub ee la kordhiyey isla markaasna xambaarsan awooddooda.
DHEGEYSO: Maxamuud Cabdi oo daljir ka tirsan ayaa waraystay xilibaan Cismaan Cilmi Boqore